ULAHLA NJANI AMABALA AMABALA NGOKUBUYA - IMPILO ENTLE
Eyona Impilo Entle Ulahla njani amaBala aMva
Besineengcali ezichitha zonke iingcebiso zabo zobuchule kunye namaqhinga ukuze ubonise ilokhwe yakho entle engenamqolo ngosuku lwakho lomtshato. Ukuhlaziywa kwe-Sep 10, 2020 Sifake iimveliso zomntu wesithathu ukukunceda uhambe kwaye wonwabele awona maxesha makhulu obomi. Ukuthengwa okwenziwe ngekhonkco kweli phepha kungasifumana ikhomishini. Imifanekiso ye-B & G
Bathetha ukuba ekuphela kwezinto ezithile ebomini kukufa kunye neerhafu, kodwa sikwanethemba lokuba akukho namnye umtshakazi ngaphandle phaya ofuna ukujongana ne-acne back ekhokelela kwi (kwaye ngakumbi ngomhla wabo womtshato. Ukuba i-runways yeli xesha ibikukukhuthaza kwakho, amathuba okuba isinxibo sakho somtshato sihle ukusuka ngasemva njengoko ngaphambili nangezitayile zomzuzu ezinje ngokusika i-flirty, ipaneli yesitere okanye ingxelo engenamva yokubuya. Kwaye njengokonwabela ukubhiyozela umsitho okhethekileyo, iilokhwe zomtshato ezingenamqolo zinokuba ngumthombo woxinzelelo ukuba ulwa ne-acne back. Ngelixa kungekho bumangaliso bong wand obunokwenza ukuba i-bacne inyamalale ubusuku bonke, funda ngezantsi ngeengcebiso zeengcali ezivela kwiinkqubo zendlela yokuphelisa umva emva kwexesha.
Yintoni ebangela ukuba amabala abuye?
Unyango lwe-Acne Back
Indlela yokuLahla amaBala amaBala amaBala
Ungawakhusela njani amaBala aMva
Yintoni ebangela amaBala aMva, nangapha?
Ukunyanga imeko yolusu, kuyanceda ukufunda ukuba ngubani umthombo wayo. I-Bacne ifana ne-acne ebusweni njengoko i-overactive glands gland, i-hormone, i-genetics, uxinzelelo kunye nokutya kunokubangela ukuphuma. 'Ulusu lwakho emqolo, nangona kunjalo, ngokucacileyo kunzima ukufikelela kulo kwaye ngenxa yoko alufumani nkathalo kwaye lunyamekele umzimba wakho wonke, utshilo ugqirha wesikhumba eNew York City uGqirha Hadley King. Abanye abantu bathambekele ekuphumeni ngasemva, kodwa kunokwandiswa kukunciphisa ukusebenza kwakho njengoko ulungiselela usuku olukhulu, utshilo. Nangona iseshoni yokuzivocavoca ilungile ukugcina umzimba kunye nengqondo yakho isempilweni, ukonyuka kokubila kunye neoyile kumqolo wakho kudala imeko yesiXeko saseNew York ethandwe ngamabala. 'Uxinzelelo ludlala indima enkulu,' wongeza ugqirha wesikhumba uGqirha Debra Jaliman. Ubusuku emva kwexesha ufumanisa uhlahlo-lwabiwo mali lwakho lomtshato unokukhupha i-cortisol, eyihormone yoxinzelelo emzimbeni wakho ebangela ukuba amadlala aphantsi kolusu lwakho avelise ioyile ngakumbi. Zininzi ezinye izinto ezibangela ama-bacne sneaky, nazo: 'Abafazi abaza kutshata bafuna ukubonakala behle, kwaye bazame iimaski ezitsha zeenwele, iitanners kunye nezinye iimveliso eziqukethe iioyile, ezinokuvala ii-pores emqolo wakho, utshilo uGqirha Jaliman. I-Bacne yinto encinci yekrele elintlangothi-mbini: 'nangona ulusu emqolo wakho lukhuni emzimbeni ukuphatha ubuso bakho, luyakwazi ukuphatha unyango olunobukrwada kuba alunamvakalelo kwaye luyomelela, utshilo uGqirha Jaliman.
Ukuqonda ngokwenene ukuba yintoni ebangela umva, kuyanceda ukufunda izinto ezine eziphambili ezinegalelo : ukuveliswa kweoyile okugqithileyo, iifollic zeenwele ezivaliweyo, ibacteria kunye neehomoni. Unokufumana i-acne naphi na apho une-follicle yeenwele, kodwa kunokwenzeka ukuba ubone i-whiteheads kunye ne-blackheads kwiindawo ezinamadlala eoyile. Umqolo kunye namagxa akho aphakathi kwezona ndawo zixhaphake ioyile emzimbeni wakho, yiyo loo nto kungamangalisi ukuba amabala avela apho.
Ukubuyela umva kunyango lwe-acne kunokunceda ekulawuleni uninzi lwezona zinto zixhaphakileyo ezinegalelo, kodwa i-genetics ikwadlala indima ebalulekileyo. Ukuba abazali bakho banengxaki yamabala, kunokwenzeka ukuba ubone ukungcola kulusu lwakho. Ewe izinto ezithile zinokubonyusa ubukrakra be-acne-ukongeza kuxinzelelo, amayeza athile anokubangela ukuba amabala abe mandundu.
Indlela yokutya kunye nococeko enegalelo kumachaphaza amva
Mhlawumbi uvile ukuba ukutya okunamafutha kunokubangela ukuphuma kwamabala. Ngelixa ujikeleze ubuninzi beoyile kunokunyusa amabala emqolo wakho, kuya kufuneka usebenze njengompheki wefry ukubona ezo ziphumo. Ikliniki yaseMayo ithi ukutya ukutya okunamafutha akunampembelelo kwi-acne. Ngaphambi kokuba ufikelele kwiintlanzi zakho ezizithandayo, nangona kunjalo, gcina le ngqondo ye-trivia engqondweni: i-carbohydrate ingayonakalisa i-acne.
Ucoceko lunokudlala indima kuphuhliso lwamaqhakuva angasemva, kodwa hayi ngendlela onokuyilindela. Ukuqonda ukuba yintoni ebangela umva, kuyanceda ukwazi ukuba isikhumba esimdaka nesicocekileyo sithanda ukuba namaqhakuva. I-oyile, hayi ukungcola, ibangela induna. Hlikihla rhoqo kwaye ulusu lwakho lunokuvelisa ioyile ngakumbi ukuhlawula. Ungayihoyi impilo yakho emngciphekweni wakho, nangona-iioyile zisaza kwakha kwaye zibangele ukuphuma kwamabala amaninzi. Konke malunga nokufumana indawo yolonwabo kulusu lwakho.
Isicwangciso sakho somdlalo wokuqhumisa amabala ngokuxhomekeke kuhlobo lwe-bacne ojongana nayo: ukuba unee-cysts, ezizinto ezibuhlungu ezibhabha phantsi komphezulu wolusu, ufuna ukubona ugqirha wesikhumba ngokudubula ngokukhawuleza kwecortisone, ngomlomo i-antibiotic okanye unyango olunamandla. Kwelinye icala, 'ii-pustules, eziluhlobo lweebhloko ezimnyama kunye neentloko ezimhlophe apho usulelo lusebenza khona ukuya kufikelela kulusu, ngokuqinisekileyo lunokunyangwa ekhaya, utshilo uGqirha Jaliman. 'Eyona ndlela ilungileyo yokuphelisa umqala onamandla kukuqala ngokudibanisa i-salicylic acid kunye ne-benzoyl peroxide ngokukhawuleza,' utshilo. Nokuba ucwangcisa ukujongana ne-bacne yakho ngokwakho okanye ufuna ukwazi ngaphambi kokuba uye kwiofisi kagqirha wakho, nantsi into ekufuneka uyiqwalasele:
Kwirejimeni engaphezulu kweyeKhawuntari
I-salicylic acid kunye ne-benzoyl peroxide zombini zizinto eziqhelekileyo zokulwa namabala ezifumaneka kunyango oluninzi lwekhawuntareni. Ndiyathanda ukudibanisa iimveliso ezininzi kunye nesithako ngasinye kuba sisebenza ngeendlela ezahlukeneyo, utshilo uGqirha Jaliman. 'Njengokuba ungadibanisa i-cardio kunye noqeqesho lokuthoba ubunzima, unokusebenzisa zombini i-salicylic acid kunye ne-benzoyl peroxide ukulwa namaqhakuva, utshilo. I-salicylic acid ithathwa njenge-beta hydroxy acid, efanelekileyo ukucoca kunye nokususa iiseli zesikhumba ezifileyo kumphezulu kunye nokunciphisa ubomvu. I-Benzoyl peroxide sisixhobo esinamandla se-antibacterial esifumana singene ngaphakathi kwipore ukubulala ibacteria ebangela induna. Ngelixa kukhuselekile kulusu lwakho, kuyaziwa ngee-bleach iimpahla kunye namanye amalaphu.
Umzimba wamachaphaza abuyayo uyahlamba
1. 'Lo mcoci wenzelwe ubuso bakho, kodwa ulungile nasemqolo, ngakumbi, ukuba uqala kwinkqubo entsha kwaye ufuna ukuzama ukuba yintoni esebenzayo, utshilo uGqirha King. Ithambe ngokwaneleyo ukuyisebenzisa yonke imihla, kodwa ineyona benzoyl peroxide (10%) enokufumana ngaphezulu kwekhawuntari ukuze isebenze ngokwenene.
Ukucoca kunye nokuCoca ngokuCoca okuQhelekileyo okuCoca amaBala, $ 5.39, amayeza.com
2. Le ndawo yokuhlamba i-creamy ine-3.5% ye-benzoyl peroxide inokusetyenziswa njengesixhobo sokucoca imihla ngemihla okanye njenge-mask ngamanye amaxesha. Sasaza umaleko omncinci ngasemva kwakho (sebenzisa ilaphu elithambileyo lokuhlamba ukuba kunzima ukufikelela kulo) kwaye ulishiye kangangemizuzu emihlanu ukuze ungene ngokugqibeleleyo kwisiphako ngasinye.
I-Neutrogena Cacisa iPore Cleanser kunye neMask, $ 6.79, isepha.com
3. Ukungaguquguquki koku hlamba kuyayinceda ukuba ibambelele kumdaka ogqithisileyo kunye neoyile ukuze ingavali kakuhle pores. Ifomula ye-benzoyl peroxide ye-4% ithambile ngokwaneleyo ukuba uyisebenzise kabini okanye kathathu ngemini, kodwa ukuba ujwayele ukoma ulusu, qala ngesicelo esinye kwaye ngokuthe ngcembe usebenze ngendlela yakho.
I-PanOxyl Benzoyl Peroxide Acne Creamy Wash, $ 11.99, walgreens.com
Umqolo wamaBala oMva oMdaka
Kuba amayeza amabala anokuma, kubalulekile ukuba unyanzise indawo echaphazelekayo. Abo banesikhumba esine-acneic banokuba nemicimbi yokuthambisa kunye neekhrim zokuvala ii-pores zabo nangakumbi, ke jonga ezo zibhalwe 'ngaphandle kweoyile' kwaye 'ingekho comedogenic, utshilo uGqirha King. Kuba kunzima ukufaka indawo yokunyanga endaweni yakho yamabala ngokukodwa emini yomsebenzi, sebenzisa into yokuthambisa ebandakanya i-salicylic acid kusasa ukuze inganeli nje ukomisa kwangoko, kodwa incede uphilise amabala amva imini yonke.
1. Le into yokuthambisa ifana nesipho esihlala sinika: ifomula yokubulala iintsholongwane ibulala ibacteria kwi pores zakho ngelixa isenza ulusu lwakho ngamandla. Ngapha koko, siyayithanda indlela ukungaguquguquki okungasindiyo omisa ngokukhawuleza kwaye uzive ukhululekile phantsi kweempahla zakho. 'Ukuba ulusu lwakho lubuthathaka kakhulu, kunqande ukubeka imveliso entsha ye-salicylic yolunye ulusu ngaxeshanye, utshilo uGqirha King.
Ifilosofi yokuCacisa iintsuku eziPhambi koNyango lwe-Salicylic Acne Treatment kunye ne-Moisturizer, $ 39, sephora.com
2. Le into yokuthambisa engenamafutha isebenzisa i-0.5% ye-salicylic acid ukunyanga amabala omzimba ngokufanelekileyo. Kuyanceda ukufumana i-acne esele ikho phantsi kolawulo, kodwa ikwasebenza ukukhusela ezintsha ekuveleni kwixa elizayo, nazo.
Ukucoca kunye nokuCoca iAdnfa yokuLawulwa kwamaBala okunyibilikisa, $ 6.79, amayeza.com
3. Esi sithambiso silky silawula imveliso ye-sebum egqithileyo ngelixa upakisha ulusu lwakho ngokufuma kunye nezinto ezilungele wena. Inqanaba le-pH elisezantsi (olona luhlu lu-3-4) lusebenza nolusu lwakho ukuze lusebenze ngokufanelekileyo njenge-exfoliant ngaphandle kokuyomisa.
Ukhetho lukaPaula lokunyanga ngaphandle komzimba nge2% ye-BHA, $ 25, paulasngce.com
Kabini okanye kathathu ngeveki, tshintsha umzimba wakho uhlambe i-acne kwi-exfoliator. Ukukhutshelwa ngaphandle sisitshixo ekuncedeni ukukhupha iiseli zolusu ezifileyo ekungangeni kuzo. Kwaye yonyusa ukujikeleza kwaye ikhuthaza ukuvela kweseli, utshilo uGqirha Jaliman. Kuphephe nje ukukhuhla ngamandla kakhulu okanye uyakomisa ulusu lwakho. Kubaluleke kakhulu ukuba ungahlubuli ulusu lweoyile yayo yendalo kuba umzimba wakho uzama ukubuyekeza ngokuvelisa ioyile eninzi, ebangela ukuqhekeka. ' Inokuba ngumjikelo okhohlakeleyo, kodwa unganceda ukuwuthintela ngezi zinto zincinci zokucoca zenza lo msebenzi.
1. Le ndawo yokuhlamba iqulethe amaso angqukuva, agudileyo, alungele abo banolusu olubuthathaka kakhulu okanye olonakaliswe lilanga. Ifomula yokubhabha ifakwe kwi-antioxidants efana nevithamin C kunye ne-2% yonyango lwe-salicylic ke iyaqhubeka nokusebenza ixesha elide emva kokuba uyihlambile. Siphinde sakhathalelwe livumba elipinki leediliya, elisinceda ukuba siqale usuku ngenqaku le-cheery.
Umzimba we-Neutrogena ococekileyo wokuhlamba umzimba kwiPinki yeGrapefruit, $ 7.99, neutrogena.com
2. Esi sikhuhla siqukethe i-trifecta ecoca ulusu: umgubo ocoliweyo, ikhiwane kunye nembewu yomhla (ekhupha iiseli zolusu olufileyo), iipapaya enzymes (ezikhuthaza ingeniso yeseli) kunye nerayisi bran (eyaziwa ngokuba hydrate kunye nolusu olugudileyo). Ungayisebenzisa ngokwakho into yokukhuhla, okanye ucoceke nangakumbi, zama ukudibanisa ne Clarisonic ngesantya esiphezulu, utshilo uGqirha Jaliman.
IDermalogica Exfoliating Body Scrub, $ 36, elukiel.es
3. Ubume obungaqhelekanga besuntswana lamandongomane aluncedo olukhulu kwesi sixhobo. Kuba isikhumba esisemqolo wakho somelele kunobuso bakho, unokukhetha i-exfoliator enzima ngakumbi njengale yenziwe ngokukodwa emzimbeni, utshilo uGqirha Jaliman.
Ives St Ilawule isiphako Apricot Scrub, $ 5.29, amayeza.com
Unyango lwamabala amabala
Uninzi lwemilingo yokuphulukisa amabala lwenzeka ngokukhawuleza. Ugqirha Graf uthi: 'Ukulala ngokwaneleyo nokugcina uxinzelelo kumgangatho ophantsi kunceda ukuthintela amaqhakuva ukuba angafiki. Gcina ubushushu bomoya kwigumbi lakho lokulala upholile ukuze ungafumani kubilo xa ulele. 'Ukuba uneenwele ezinde, zama ukulala neenwele zakho phezulu ukuze naziphi na izinto ezinokubakho zokuvala izinto ozisebenzisayo kwimigca yakho zingangqubeki emqolo, utshilo. Ufuna ukunxiba iimpahla ezomileyo zekotoni ebusuku, ezinganeli nje ukufunxa ukufuma okungcono, kodwa zikwanika ibala lakho lomqolo elinye igumbi lokuphefumla kwaye ivumela ezi ndlela zokusebenzisa i-bacne ekulula ukuzisebenzisa zisebenze ngamandla wazo ngelixa ulele.
utshata njani emissouri
1. Ngokucacileyo, umba ophambili wokususa i-acne emva kukuba indawo kunzima ukufikelela kuyo. Ukuba umntu oza kutshata naye akanakukunceda uthambise into yokuthambisa, oku kucacisa ukutshiza nge-salicylic acid kusombulula umba ngombhobho we-360 degree onokuthi u-spritz ujonge ezantsi. Yenziwe nange-menthol, enceda isikhumba esipholileyo kunye nesicaphukisayo-ngakumbi ukuvuselela emva kokuzilolonga okunzima.
Ukutshiza kweQela loMzimba, i- $ 40, sephora.com
2. Esi sitshizi sisebenzisayo sikwafefa nangaliphi na icala kwaye uya kuwaxabisa amandla asomisa ngokukhawuleza ukuze ungalindi ixesha elide ngaphambi kokuba uphose iimpahla zakho. Ubungakanani bohlobo lokuhamba luhle kakhulu ekugcineni irejimeni yakho ngexesha lakho lokutshata, nawe.
Ukutshiza ngeGlytone Back Acne, $ 19, elungec.com
3. Le spray ye-beta hydroxy acid ine-salicylic acid encinci (malunga ne-0.5%) kodwa yenziwe ngomxube owahlukileyo wezinye izithako ezifana ne-sodium chlorite ekulungeleyo ukwahlula iintsholongwane kangangexesha elide.
Unyango lwe-Glo Therapeutics Back Acne, $ 33.50, gloprofessional.com
Ngenkqubo yasekhaya, ufuna ukuyinika ubuncinci inyanga ngaphambi kokuba uqale ubone iziphumo. 'Ungawanyanga amabala ngeemveliso ezivela kwivenkile ethengisa iziyobisi okanye kwivenkile yesebe, kodwa awuyi kubona into ecoca amabala isenzeka ngokukhawuleza, utshilo ugqirha wesikhumba uGqirha Jeannette Graf, unjingalwazi osekliniki kwi-Mount Sinai School of Medicine eNew York Isixeko. 'Kuya kufuneka usebenze ngokukubonela ubuncinci iiveki ezine ukuya kwezintlanu, kwaye ukuba awufumani phuculo, lixesha lokwenza idinga nederm.'
Unyango lwe-Acne Acne
Ukuba une-acne ephindaphindayo, i-cystic acne okanye ufumana amanqaku amnyama kunye neziva, yenza idinga nedermatologist yakho. Ugqirha unokuvavanya ubungqongqo bemeko yakho kwaye akhombe umba ukuze ungachithi xesha ngexesha okanye ngemali kwiimveliso ezithengiswayo ezingomelelanga ngokwaneleyo. 'Ugqirha wesikhumba sakho uya kuba nakho ukufumana eyona ndlela yonyango ilungileyo, nokuba yidosi ephantsi yedosi, utshintsho lweepilisi zokuthintela inzala, ukhilimu onamandla kunye necortisone, utshilo uGqirha Jaliman.
Uninzi lwezi zonyango luya kuthatha malunga nenyanga ukuba uqale ngokwenene ukubona iziphumo, kodwa i-cortisone shot iya kubonisa ukuphuculwa kwangoko-kuluncedo ukuba uziva unoxinzelelo lokukhulisa intloko yayo embi kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi komtshato wakho. Elona candelo lililo kukuba ugqirha wakho unokukwazi ukukunika isofter kwangolo suku ubiza ngalo kuba le nkqubo iyakhawuleza, utshilo uGqirha Graf.
Ukuba umba awukapheli, yiba nencoko kunye nedermatologist malunga nolunye unyango olunokumiselwa ixesha elide njenge-Aczone, i-Accutane okanye i-spironolactone ye-acne acne, utshilo uGqirha Graf.
Siya kuba sixoka ukuba besingakhange sizame amayeza e-bacne asekhaya njengentlama yamazinyo njengonyango lwamabala amabala kunye nemon yokukhanyisa amanqaku amnyama. Kodwa ngakumbi kwiinyanga ezikhokelela kumtshato wakho, ngoku ayiloxesha lokuba ulinge ngakumbi ngokubandakanya izinto ezenziwe ekhaya okanye ezisekhitshini kwinkqubo yakho. 'Akukho nto ixhaswa yinkqubela phambili kwezenzululwazi ngokuphumelela kweemveliso ezikumgangatho wokutya ezisetyenzisiweyo, utshilo uGqirha Graf. Ndiyakuncoma ukunamathela kukutya okunempilo, okunokulinganisela, kwaye uphephe ubisi, olunamahomoni aziwayo ukuba acaphukisa ulusu olubuthathaka. Xa usetyisa ukutya, iiasidi ezisesiswini sakho ziyasusa iityhefu, kodwa ukuba uyisebenzisa ngokwezihloko, utyhila isiphako kwimichiza nakwibacteria, utshilo. Iswekile ethambileyo okanye ityhubhu ekhuhliweyo eyenziwe ngeoyile ye-olive inokuba sisicoci esikhulu sokwenza ekhaya, kodwa ngaphaya koko kufanelekile kutyalo-mali lokuthenga iimveliso zokhathalelo lolusu kunye nezithako ezibonakalisiweyo ukuba ziyasebenza kwi-bacne.
Njengokuba ukulahla i-acne yakho yangemva kwakungekho xinzelelo ngokwaneleyo, kuvela ingxaki entsha: amabala amabala. Zikhula xa ukudumba okubangelwa zii-cysts ezinzulu kunye namabala kusonakalisa i-collagen eluswini lwakho. 'Izicubu ezisempilweni zithathelwa indawo ziingcwecwe ezibomvu, yiyo loo nto kunokubakho ukubekwa ngaphakathi, ukuba bomvu kunye nokungalingani, utshilo uGqirha King. Nangona isisombululo sethutyana sivela kuncedo lokufihla okukhulu (zama: Izimonyo eziMangalisayo zeConferensi epheleleyo, $ 42, sephora.com ), Eyona ndlela ilungileyo yokuphelisa amabala kwixesha elide kuya kuthatha umonde kwaye ngenkuthalo ukubandakanya ukhilimu okhanyayo kwirejimeni yakho yobuhle yemihla ngemihla. Kwizikhuselo ze-hyper-pigmented ezingasetyenziswanga nzulu kakhulu, slather kwezi zithambiso kunye nemixube:
1. Ingcinga yokufaka ioyile naphina kufutshane nebhele yakho yayikade isithumela ukubaleka sibalekela iinduli, kodwa sesona sixhobo sakho semfihlo xa kuziwa ekuchachazweni kwamabala amabala. Igcina ulusu lunyibilikisiwe kwaye luthambile ukwenza inkqubo yokuphilisa ihambe ngokukhawuleza, kwaye ivithamin E iphucula ukubumba kwesikhumba.
Unyango lwe-Bio-Oil Scar, $ 9.19, amayeza.com
2. Le khithi yemixube yeekhemikhali iza ne-ampoule yeoyile oyikhupha kwiphedi ukuze ukhuphe ngobunono umqolo wakho kwaye ubonakalise izicwili ezibonakala zincinci. I-glycolic kunye ne-salicylic acid combo inyibilikisa izicwili ezingacacanga ke oko kuyanceda ukwenza ezinye iimveliso zokhathalelo lolusu zitshone ngcono kwaye zisebenze ngokufanelekileyo, nazo.
UPeter Thomas Roth iipesenti ezingama-40 ze-Acid Peel, $ 88, sephora.com
3. Ngelixa ulusu lwakho luzilungisa ngokwendalo ubusuku bonke, i-combo yeepeptides, i-collagen kunye ne-antioxidants kule cream zinceda ukukhawulezisa inkqubo yamabala amanxeba. Yisebenzise kube kanye ngobusuku iinyanga ezimbini kumanqaku amatsha e-bacne, okanye iinyanga ezintathu ukuya kwezintandathu kwizikhewu ezindala.
IMederma PM Cream Cream Cream Cream, $ 34.99, walgreens.com
Njengabahleli bezobuhle, simamele ezinye iintetho malunga nelanga elikhuselweyo elivela kwiiderms kunangaphambili esakhe sakwenza esikolweni, kodwa kubaluleke ngakumbi xa unesikhumba esine-acne. UGqr. Graf ucebisa ngelithi: 'Ukugqatswa lilanga kwenza ukuba amanxeba abe mabi ngakumbi. 'Kwaye ukukhanya kwelanga kungangena nakwimpahla yakho ngoko ke kubalulekile ukuyinxiba ngalo lonke ixesha.' Nangona kunjalo, ukufumana i-sunscreen engabangeli ukuba amabala omzimba azive engenakwenzeka-kude kube ngoku. Izinketho zamva nje kwintengiso zinobuchule ngakumbi kwaye zinobuhlobo kumabala kunangaphambili:
1. Ngokungafaniyo nezithambiso ezinzima, ezityebileyo okanye into yokuthambisa enamafutha, le ntandokazi iyamkelekileyo ayina-oyile kwaye ayisindi kakhulu kuba ayizukuvala ii-pores zakho. Le fomyula ibanzi ingena kulusu endaweni yokuhlala phezu komhlaba oko kuthetha ukuba wakuba uyisebenzisile, awuyi kuqaphela ukuba ibikhona.
I-Elta MD UV ecacileyo ye-SpFrum ye-SpF 46, $ 32, elungec.com
2. Esi sithambiso se-sunscreen sine-oyile senza ukuba kube lula ukufumana iindawo ezinobuqhetseba ezifana neziko lomqolo namagxa akho. Ifomula yokufunxa ngokukhawuleza ikondla ulusu idosi esempilweni yeVitamin C kwaye ihlala ibila- kunye nokunganyangeki kwamanzi ukuya kuthi ga kwimizuzu engama-80- ilungele ixesha elide ngaphandle.
I-Supergoop SPF 30 i-Sunscreen Mist eneVitamin C, $ 19, elungec.com
3. Esi sandla singazisasazeli sisasaza umgubo welanga yenza kube lula ukuba uthuli kukhuseleko lwe-UVA / UVB ngaphandle kokuziva uncangathi. Ifomula yamaminerali ilungile kulusu oluqhelekileyo lwamaqhakuva kunye nezikhuselo ezincinane zentsimbi kunye neziphako ngaxeshanye.
I-Colorescience Sunforgettable Mineral Sunscreen Brush SPF 30, $ 57, https://www.colorescience.com/category/sunforgettable
Ngelixa i-retinoids, ezinjengeRetin-A, zihlala zinxulunyaniswa nokuguga, zikwasebenza nakwizikrelemnqa zamabala, kodwa kuya kufuneka ufumane iphepha kugqirha wakho wesikhumba. Yifomula enamandla amakhulu, ukuze uqaphele ukubonwa ngokukhawuleza kunye nokucaphuka. Zama ukuyisebenzisa yonke imihla de ulusu lwakho luqhele ukusetyenziswa kwisicelo semihla ngemihla. Unyango lokukhanya okuluhlaza kunokunceda ekunyangeni amabala amabala ngenxa yendlela evuselela ngayo imveliso yeclagen esempilweni, utshilo uGqirha Jaliman. Kufanelekile ukulandela ukuba ukhetho lwe-counter-counter alusebenzi kuwe.
Ungawathintela njani amaBala amva kwixa elizayo
Imfuza kunye neehomoni zihlala zingumthombo wamabala, kodwa uxinzelelo kakhulu ludlala indima enkulu. Ukucwangciswa komtshato ngokuqinisekileyo kuyaxinzelela kwaye kubalulekile ukuba ukhumbule ukuthatha ikhefu ekucwangciseni rhoqo ukuze uzinike ingqalelo kwaye uphumle. Ukunceda ukunqanda umva wamabala ukuba angenzeki kwixesha elizayo, zama iindlela zokunciphisa uxinzelelo ezifana neyoga okanye iipilates — into ekwenza wonwabe, utshilo uGqirha King. Ukuhlala unamanzi amaninzi, ukuphumla ngokwaneleyo kunye nokufumana irejimeni efanelekileyo yokunyanga amabala ngaphambi komhla womtshato wakho kuya kukunceda uzive umhle kwaye uzithembe xa uhamba ezantsi kwelo gown ingenamqolo, utshilo uGqirha Graf.
Izipho zeminyaka emibini zomtshato kuye
Umtshato wesibini umtshato omtsha
ndikuthanda kangakanani lyric
isiqingatha phezulu isiqingatha ezantsi iinwele zomtshato